धान पसलका साथ - Thermomix रेसिपी | ThermoRecines
Ribs संग चामल
चामल58 मिनेट4 व्यक्ति
मैले सधैं यो कुरा सुनेको थिएँ कि पसलको यो चामल कति राम्रो थियो र म यसलाई साँच्चै तयार गर्न चाहान्छु किनभने मलाई यो थाँहा थियो मेरो परिवार यो प्रेम गर्न गइरहेको थियो र यो यो छ।
यो एक नुस्खा हो धेरै सरल र बच्चाहरूले यसलाई "चीचा" सँग उनीहरूले मन पराउँछन्।
Thermomix® मा धान विलासी छन्। यो एक फरक छ भने फरक पर्दैन सेतो चामल, संयुक्त राष्ट्र risotto वा एक चामल चामल सबै सरल र स्वादिष्ट छन्।
1 Ribs संग चामल
एक चावल जुन बच्चाहरू र वयस्कहरूले मन पराउछन्।
खाना पकाउने समय: 58M
१०० g अतिरिक्त कुमारी अलिभ तेल
पोर्क पसलहरूको 500 ग्राम, सानो टुक्रा मा काट
१ g० ग्राम हरियो सिमी
टुक्रिएको टमाटरको 100 ग्राम, क्यान्ड वा प्राकृतिक
१ चिम्टी केसर वा फूड कलरिंग
१ g० ग्राम रातो मिर्च, स्ट्रिप्समा काटियो
हामीले गिलासमा लसुन राख्यौं र प्रोग्रामिंग गरेर उनीहरूलाई काट्यौं Seconds० सेकेन्ड, गति 5।
हामी तेल र पसलाहरू थप्दछौं। हामी प्रोग्राम १० मिनेट, भेरोमा तापमान, बाँया पालो, चम्चाको गति।
काटिएको हरियो बीन्स र कुचिएको टमाटर गिलासमा थप्नुहोस्। हामी प्रोग्राम १० मिनेट, भेरोमा तापमान, बाँया पालो, चम्चाको गति।
पेपरिका, पानी, केसर (वा रंग) र नुन थप्नुहोस्। हामी प्रोग्राम Minutes मिनेट, १००º, बाँया पालो, चम्चाको गति।
अन्तमा हामी रातो मिर्च र चामल थप्छौं। हामी प्रोग्राम Minutes मिनेट, १००º, बाँया पालो, चम्चाको गति।
समाप्त भएपछि, हामी नुन विन्दु जाँच गर्छौं। केहि मिनेट खडा र सेवा गर्नुहोस्।
थप जानकारी - मन्दारिन र इलायची सुगन्ध संग सेतो चावल गार्निश / Thermomix® को साथ बनेको उत्तम रिसोटोस / समुद्री खाना सूप चामल
मुहान - चावल Levante बाट थर्मोमिक्स®
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: चामल र पास्ता, Celiac, ल्याक्टोज असहिष्णु, अण्डो असहिष्णु, Years बर्ष भन्दा बढी, १ १/२ घण्टा भन्दा कम
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » चामल र पास्ता » Ribs संग चामल
जस्तो म तपाईको ब्लग लाई दिनहुँ धेरै चोटि हेरेर हेर्छु र मैले पहिले नै केहि रेसिपीहरू बनाइसकेको छु, मँ चाहान्छु कि तपाईले एचएच २१ को लागि कार्यक्रम राख्नु भएको छ, जुन तपाईलाई छ, धेरै धेरै धन्यवाद र सहयोग जारी राख्नुहोस्। TH को उपयोग गर्नका लागि केहि हामीले यसलाई भान्छामा बिर्स्यौं।
Smyrna लाई जवाफ दिनुहोस्
Smyrna Tm-21 को साथ यो नुस्खा बनाउनको लागि, तपाईंले पुतली ब्लेड र स्पीड 1 मा राख्नु पर्छ।
सबैलाई नमस्कार / तपाईंले मलाई tx 31१ दिनुभएको छ र मलाई यो तौलको समस्याको कारणले छोड्ने डर छ, त्यहाँ सामान्य पकाउने कुनै विधि छ जुन सही तरीकाले नबुझीकन म स्वस्थ भोजनको लागि पनि व्यञ्जनहरु सराहना गर्दछु। बच्चाहरूको लागि किनभने मेरो जहिले पनि उस्तै स्यान्डविच वा पिज्जा खान्छु। यस वेबसाइटका लागि धन्यबाद
मार्च, मलाई राम्ररी थाहा छैन तपाईको मापन सामग्री के द्वारा सही मतलब छ। सबै भन्दा तार्किक र अधिकमा थर्मोमिक्स भएकोमा सुरूमा यो हो कि तपाईं व्यंजनहरू र तिनीहरूले तपाईंमा लगाइएका भारहरूमा टाँसिरहनुहोस्। त्यसपछि समयको साथ तपाईं यसको ह्या you प्राप्त गर्नुहुन्छ र जब उनीहरूले तपाईंलाई प्याजको २०० ग्राम बताउँछन्, तपाईं यसको वजन बिना नै तपाईं प्याज लिनुहुन्छ जुन त्यो वजनको नजिक छ।
म सूप, तरकारी क्रीम, साना माछाको डिनरका लागि धेरै स्वस्थ व्यंजनहरू तैयार गर्न चाहन्छु ... सूचकांकमा एक नजर राख्नुहोस् र तपाईंले धेरै केहि सरल र सरल पाउनुहुनेछ।
मारि कारमेन, टोमेलोसो भन्यो
नमस्ते सिल्भिया, आज मसँग खाना छ किनकि त्यहाँ केहि साप्प छैन के गर्नु पर्छ उनीहरु धेरै राम्रा देखिन्थे र चामल मलाई जे भए पनि राम्रो हुन्छ, म तिमीलाई भन्छु, अभिवादन
मारि कारमेनलाई जवाफ दिनुहोस्, टोमेलोसो
मारी कारमेन, यो प्रयास गर्नुहोस्, यो एक धेरै साधारण विधि हो र चामल राम्रो बाहिर आउँछ।
लुसिया मार्टिनेज प्लेसहोल्डर छवि भन्यो
चामल धेरै राम्रो छ, मैले यो पहिले नै दुई पटक बनाइसकेका छौं हामी सबैलाई यो मनपर्दछ ... एउटै मात्र कुरा मैले पुतली राखेको छैन मैले टिप्पणीमा देखिसकें जुन तपाईंले राख्नुपर्दछ।
लुसिया मार्टिनेजलाई जवाफ दिनुहोस्
म २१ औं बेलको २१ औं को लागि बनाउँछु?
एन्टोनिया tm-21 को साथ तपाईं यो नुस्खा बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईंले केवल ब्लेड र स्पीड 1 मा पुतली राख्नु पर्छ।
लोला सान्चेज भन्यो
मलाई तपाईका व्यंजनहरू विशेष रूपमा डेसर्टहरू मनपर्छ, धन्यवाद
लोला सान्चेजलाई जवाफ दिनुहोस्
लोला, हामीलाई अनुसरण गर्न धेरै धेरै धन्यवाद। हामी मिठाइ मन पराउछौं, तिनीहरू एक उपाध्यक्ष हुन्। तर सामान्यतया हामी तिनीहरूलाई कसैसँग बाँड्न खोज्छौं ताकि हामी आफैले आफैंलाई थोरै हेरौं।
यस चामल भन्छन् मलाई मेरो घरमा खाऊ, हामी चामललाई यस हप्ता माया गर्छौं
तानिया, यो महान् कुरा निश्चित छ कि तपाईले यसलाई प्रेम गर्नुहुनेछ, तपाईले मलाई भन्नुहुनेछ।
इज्मिरलाई पनि त्यस्तै हुन्छ (मसँग २१ छ)। हामी धेरै आभारी हुनेछौं यदि तपाईं हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो कि व्यंजनहरू बनाउनको लागि सक्षम हुन के हो।
सुसन जब हामी राख्छौं, चम्चा स्पीड र बाँया पट्टि घुम्नुहोस्, Tm-21 को साथ तपाईले पुतली ब्लेड र स्पीड १मा राख्नु पर्छ।
धन्यवाद! नोट लिनुहोस् !!
मैले हिजो यो धेरै राम्रो गरें, हामीले वास्तवमा पसल मनपरायौं, यो मलाई धेरै कोमलताले बाहिर आयो, थर्मोको मासु धेरै कोमल बाहिर निस्किएन र मलाई कसरी शंका लाग्यो कि यो कसरी बाहिर जान्छ भन्ने बारे थियो, तर हे, वास्तवमै महान, मैले यो सिफारिस गरेको थिए, नुस्खा को लागी धन्यवाद
एलिसिया, मलाई तपाईको खुशी लागेको छ। सत्य यो हो कि जब मैले यसलाई बनाएको हुँ, म पनि मेरो शंका थियो, तर पसलाहरू महान र धेरै रसदार बाहिर आउँछन्।
अभिवादन र हामीलाई अनुसरण गर्नका लागि धन्यबाद।
यो उत्तम लाग्छ म यसलाई प्रयास गर्छु .. धन्यवाद
मारी, यदि तपाईं यसलाई प्रयास गर्नुभयो, तपाईं यसलाई दोहोर्याउनुहुन्छ। यो स्वादिष्ट बाहिर आउँछ। मेरो परिवारले यो मन परायो, मैले यो १ 15 दिन अघि गरेको थिए र आज उनीहरूले मलाई फेरि सोधे।
हामीले भर्खरै यो खायौं र यो स्वादिष्ट र ठीक थियो। एक उत्तम विधि। यसलाई साझा गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद।
म धेरै खुशी छु कि यो तपाईको लागि ठूलो भयो। सत्य यो हो कि यो एक धेरै सफल नुस्खा हो।
हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद
नमस्कार, मैले भर्खर ther बर्षमा यसको थर्मोमिक्स प्राप्त गरें किन्नुहोस् यो खरीद गर्ने सोचमा, मँ अडिएँ र आशा गर्छु तपाईले मलाई जे गर्न सक्नुहुन्छ मद्दत गर्नुहोस्। तपाई कसरी आलु स्टु बनाउनु हुन्छ पसल संग?
बधाई छ सिल्भिया आफ्नो नयाँ खरीद मा। उनी भान्साकोठामा तपाईंको सबैभन्दा राम्रो साझेदार हुन्, तपाईं रमाउनुहुनेछ। र हामी हाम्रो पक्षका लागि हाम्रो व्यञ्जनहरू तपाईंलाई मद्दत गर्न प्रत्येक चीज सम्भव गर्दछौं। यो लामो समय भयो जबसम्म म यो नुस्खा बनाउँदछु जुन तपाईंले मलाई भन्नुभएको छ, मलाई प्रोत्साहन गरे झैं म यो प्रकाशित गर्नेछु।
पहिले म भन्न चाहन्छु, यस पूर्ण र रमाईलो वेबसाइटमा बधाई छ जुन तपाइँले बनाउनु भएको थियो र दोस्रो हो…। चामल मेरो लागि राम्रो बाहिर आयो! नुस्खा को लागि धेरै धेरै धन्यवाद !!
म यस वेबसाइटलाई चिन्न पाउँदा खुसी छु र तपाईलाई थाँहा छ कि मैले यो Thermomix भएका धेरै व्यक्तिहरुलाई सिफारिस गरेको छु !!
आइडा, हामीलाई हेर्नु भएको र सिफारिस गर्नु भएकोमा तपाईंलाई धेरै धन्यवाद। मलाई खुशी छ कि तपाईंले चामल मनपराउनुभएको छ, हामीलाई पनि मन पर्छ। शुभकामना।
तपाईको व्यंजनहरुका लागि धेरै धन्यबाद, तपाईले खाना पकाउन एकदम सजिलो बनाउनु भयो, मैले थर्मो किनेको छु र सत्यमा म अचम्मित छु, आज मैले चामल बनाए र यो ठूलो थियो, मेरो परिवारले यसलाई माया गर्‍यो, यो कति अद्भुत छ।
म धेरै खुसी छु मोनिका। मलाई आशा छ कि तपाइँ हाम्रा रेसिपीहरू मनपराउनुहुन्छ र ती थर्मोमिक्स धेरै प्रयोग गर्न मद्दत गर्दछ। हामीलाई हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद। शुभकामना।
रत्न villegas लोपेज भन्यो
हरियो सिमी भाँडो वा प्राकृतिक हुन सक्छ
Gema Villegas लोपेजलाई जवाफ दिनुहोस्
मणि, हरियो सिमी प्राकृतिक छन्।
म यस पृष्ठमा Inma नयाँ हुँ, केहि प्रश्नहरू के तपाई पँछाहरुलाई केहि घण्टा अगाडि नै मेरिनेट गर्नुहुन्छ कि तिनीहरूले कुनै मासु जस्तो स्वाद लिन्छन्, हैन? अभिवादन
मारिया पिलर मोलिना - प्राडोस मोरा भन्यो
म तपाईंको पृष्ठमा नयाँ हुँ, र सत्य यो हो कि तपाईंले बनाउनु भएको सामान्य खाना पकाउने विधिहरूको मात्रा देखेर मलाई साँच्चिकै मन पर्थ्यो, मैले थर्मोमिक्स थोरै छोडिदिएको छु भन्ने आशा गर्छु कि तपाईंको विचारहरूको साथ मैले यसलाई अधिक प्रयोग गर्ने छु, मलाई लाग्छ कि यससँग व्यंजनहरु को संख्या जुन तपाइँ मलाई भान्छामा एक adipta प्रकाशित गर्नुहुनेछ। अभिवादन र बधाई हो।
मारिया पिलर मोलिना - prados mora लाई जवाफ दिनुहोस्
मारिया पिलर स्वागत छ !! पक्कै पनि हामी सबैको बिच हामी तपाईलाई फेरि थर्मसमा अंकुश लगाउँदछौं, किनकि यो एक दुर्गुण हो। म तिमीलाई भन्छु। एक विधि बनाउनुहोस् र हामीलाई बताउनुहोस्। शुभकामना
म अहिले यो डिश बनाउँदैछु र मैले एउटा प्रश्न गरेकी थिएँ, यदि मैले यसलाई स्थिर गरे, के यो पछि राम्रो हुन्छ?
एलेना, सत्य यो हो कि मैले कहिल्यै चामल फ्रि गरेको छैन, तर मलाई लाग्दैन कि यो उही हो किनकि चामलहरू यसलाई जस्तै खाइनु पर्छ कि यो जहाजमा नजाओस्। तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ र फ्रीज पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि कुनै पनि धानको स्ट्रि-फ्राइज हुन्। त्यसो भए पनि, म सेतो बाहेक कहिल्यै चामल फ्रि गर्ने छैन।
नमस्ते केटीहरू !!! म तपाईंलाई सोसुरी वा कसरी पसलहरू बनाउने भनेर सोध्न चाहान्थें तर आलु वा चामलको साथ होइन, मेरो घरमा हामीलाई यो धेरै मनपर्दैन र मेरी आमाले अब ऊ थर्मोमिक्सको साथ खाना पकाउन प्रोत्साहित गरिरहेकी छिन् मलाई भन एक उपाय हामी कसरी घर मा नवीन गर्न सक्नुहुन्छ, धन्यवादsssssss हेर्नका लागि !!!
लोरेना, मैले तपाईलाई पसलका व्यंजनहरू फेला पार्न कोसिस गरें, तर प्राय: जसमा आलुहरू छन् वा चामलबाट बनेका छन्। म हेर्दै रहन्छु र यदि मैले कुनै कुरा पाएँ भने म तपाईंलाई भन्नेछु। शुभकामना
शुभ दिउँसो, म यसलाई कहिले काँहीले बनाउँदछु, हामी तरकारीहरू अभिवादन मन पराउछौं
राम्रो विचार Carmen, हामी यसलाई अर्को पटक प्रयास गर्नुपर्दछ। शुभकामना
मैले भर्खरै धान बनाएँ र यो निकै राम्रो भयो, तर करbsहरू थोरै कडा थिए। मैले यो पनी लामो समयसम्म सिफारिसले भनेको थिएँ, उनीहरूलाई अलि बढी टेन्डर बाहिर निकाल्ने कुनै चाल छ?
मारिया, रेसिपीको समयको साथ, तिनीहरू मेरो लागि राम्रोसँग बाहिरिए, तर यदि तपाईं चाड थप्नु अघि अर्को पटक थोडी लामो पसिना राख्न चाहनुहुन्छ भने।
मसँग केहि दिनको लागि थर्मोमिक्स रहेको छ र यो मेरो पहिलो विधि थियो। चामल र पसलहरू ठीकै थिए र यो स्वादिष्ट थियो। अहिले तँलाई भट्टीमा कोला-काको केकको नुस्खा छ, मँ भन्छु यो कसरी भयो। तपाईका व्यंजनहरु को लागी धेरै धन्यबाद, म उनीहरुलाई जारी राख्ने छु।
सिल्भिया, मैले यो चामल आज खानको लागि तयार पारेको छु र यसलाई पसलहरू बनाउनुको सट्टा मैले यसलाई कुखुराको टुक्रा र रातो सॉसेजले पकाएँ। मैले समयलाई अलिअलि अनुकूलित गरें, किनकि पोलो पसलहरू भन्दा पहिले पकाइन्छ, र परिणाम एकदम राम्रो छ। चुम्बन र फेरि तपाईले हामीलाई दिनहुँ दिने विचारहरूको लागि धन्यवाद
कस्तो राम्रो विचार हो, मैले यो प्रमाणित गर्नुपर्नेछ कि मेरा साना बच्चाहरूलाई यो मन परेको छ। शुभकामना
jolin !!!! चामल स्वादिष्ट थियो, धन्यवाद !!!
नमस्ते, म जान्न चाहान्छु कि म पूरै नुस्खालाई अन्तिम चरण सम्म बनाउन सक्दछु, किनभने म शनिबार गर्न चाहान्छु तर मसँग मेरो फुटबल छ र उसले मलाई बिहान छोड्छ, र त्यसपछि म फर्किएपछि एक घण्टा आधा, चावल र काली मिर्च जोड्नुहोस्, वा यदि यसको विपरित सिफारिस गरिने छैन।
सबै चीजको लागि धेरै धन्यबाद, मलाई तपाईंको पृष्ठ मनपर्दछ।
मार्च, तपाईलाई छिट्टै जवाफ नदिएकोमा माफ गर्नुहोस्, तर कहिलेकाँही यति धेरै प्रश्नहरू हुन्छन् कि हामीले प्रायः सबैलाई उत्तर दिएका थियौं र ती मध्ये केही तिनीहरूलाई नदेखी हामी पारित गर्दछौं।
तपाईले भन्नुभए अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले तयार रहेको सबै चीज छोड्नुहुन्छ र जब तपाई फर्कनुहुन्छ तपाई मिर्च र चामल जोड्ने अन्तिम चरण गर्नुहुन्छ। तपाइँ हामीलाई भन्नुहुनेछ यो तपाइँको लागि कसरी काम गर्दछ।
नमस्कार, हिजो मैले यस चामललाई खानको लागि तयार पारेको थिए, यो स्वादिष्ट थियो।
एउटा प्रश्न, के यसले फरक पार्छ कि पसलाहरू म्यारीटेड छन् कि छैनन्?
अभिवादन र तपाईको व्यंजनहरु को लागी धेरै धन्यबाद।
आना, यो कुरा मतलब छैन कि तपाईं म्यारिनेट प्रयोग गर्नुहुन्छ वा गर्दैनन्, केवल कुरा के हो भने कि मरीनेट गरिएको छ उनीहरूले स्वादको पनि धेरै रिच टच दिन्छन्।
नमस्कार! यो स्वादिष्ट छ, तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्न कसरी तपाईं मलाई आफ्नो व्यंजनहरू संग मद्दत। धेरै धेरै धन्यवाद।
कान्छी, म धेरै खुसी छु कि हाम्रो व्यञ्जनहरूसँग हामी तपाईंलाई प्रत्येक दिनको मेनूमा हात दिन्छौं। हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद। शुभकामना
gिरोना को एकान्तता भन्यो
सत्य यो हो कि यो स्वादिष्ट भयो, तर म people व्यक्तिको लागि मात्रा जान्न चाहन्छु।
सोलेड डे गिरोनालाई जवाफ दिनुहोस्
त्यो थर्मोमिक्स गिलास को आकार को लागी अधिकतम रकम हो। ब्लगका केहि साथीलाई चामलको मात्रा बढाउन प्रोत्साहन गरिएको छ र टिप्पणी दिनुहोस् कि यो अति बग्नेछ।
म तपाईंलाई भन्न चाहान्छु कि नुस्खा एकदम राम्रो छ, सत्य यो हो कि हरेक चोटि म तपाईंको एक नुस्खा लिन्छु यो राम्रो छ, धेरै धेरै धन्यवाद।
RACHEL लाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई खुशी छ कि तपाईले यो मनपराउनु भयो!
यो एक सफल केटीहरू भएको छ, म तपाईंलाई बधाई दिन्छ किनभने मेरो श्रीमान् खानाको लागि विशेष र उत्कृष्ट हुनुहुन्छ! मैले हरियो सिमीलाई हरियो मिर्चको ठाउँमा राखेको छु।
एक चुम्बन र एक राम्रो गर्मी सबैलाई स्पष्ट !!!!
म तपाईंलाई धेरै मन पर्यो कि धेरै खुसी छु। सत्य यो हो कि यो एक धेरै पूर्ण विधि हो र यो स्वादिष्ट बाहिर आउँछ।
मैले भर्खरै चामल बनाएको थिएँ र यसले लगभग केही पनि स्वाद लिएको छैन, अन्तमा मैले अधिक नुन थपे पनि। योसँग भएका सबै सामग्रीहरूको साथ यो धेरै अनौंठो हो तर यसको कुनै स्वाद थिएन। धेरै अनौंठो ... प्राय सबै भन्दा धेरै रेसिपीहरू राम्रोसँग बाहिर आउँदछन् तर यसको साथ मलाई थाहा छैन मलाई के भयो।
के पसलहरू मर्मिन गरिएको थियो ?? यदि मैले सहि सम्झना गर्दछु कि यसले एक विशेष स्वाद दिन्छ, तर यो मेरो लागि अनौठो हो किनभने यो चामल राम्रो बाहिर आउँदछ।
तर कति व्यक्तिलाई पसलहरू छन्? धन्यवाद
२ व्यक्तिको लागि
नमस्ते !!! मसँग बाह्र बर्षको लागि टीएम २१ छ र मैले यो ब्लग फेला पारे पछि यस हप्ता जस्तो पकाएको छैन। धेरै धेरै धन्यवाद !!!!
धेरै धेरै मारीक्विटा, एक खुशी को लागी धन्यवाद! र स्वागत छ, अवश्य पनि।
नाओमी बडोना भन्यो
नमस्कार ...। यो दोस्रो पटक हो कि मैले यो रेसिपी बनाएको छु र हामी यसलाई घरमा मन पराउछौं ... थर्मोमिक्समा भात बाहेक यो उत्कृष्ट आउँछ…। म यहाँबाट धेरै व्यंजनहरू बनाउँछु किनकि मलाई उनीहरू धेरै मनपर्दछ र व्यंजनहरू बाहेक। धेरै राम्रो लेखिएको छ! चुम्बनहरू।
Noemí Badalona लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईंको टिप्पणी नाओमीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद! म छोटो समयको लागि ब्लगमा सहयोग गर्दै छु तर मैले यसलाई लामो समयदेखि पछ्याएको छु ... सत्य यो हो कि मेरा सहकर्मीहरूले यो गरेका छन् र ती घटनाहरू आश्चर्यजनक रूपमा गर्छन्। मलाई आशा छ कि चाँडै उनीहरूले इटालीमा बनाउने रिसोटो राख्ने छन् जुन पनि धेरै स्वादिष्ट हुन्छ।
नमस्कार ... घरमा हामी साँच्चिकै चामल चाहन्छौं, मेरो पति इक्वेडरका हुन् र त्यहाँ भात रोटी जस्तै छ, हामी लगभग दैनिक खायौं ... र म त्यहाँ उही थर्मोमिक्सको साथ समान भाँडा बनाउन चाहन्छु ... रेसिपी म तपाईंलाई भन्न चाहान्छु यसलाई मेरो थर्मोमिक्ससँग बनाउनको लागि किनकि यो सजिलो र छिटो छ .... धेरै धेरै धन्यवाद। चुम्बनहरू।
मलाई यो विभिन्न ग्यास्ट्रोनमिक संस्कृतिहरूको बारेमा मनपर्दछ ... जसले तिनीहरूलाई केवल उनीहरुलाई चिन्छ उसले उनीहरूले आफ्नो देशमा खाने कुरा मात्र खाने कुरा सोच्न सक्छन, र सत्यबाट अरु केहि छैन! मैले जाल वरपर अलि अलि हेरेँ र मैले यो पृष्ठ पाए http://www.mis-recetas.org/recetas/advanced_search?dificultad=1&internacional=157&page=2
तपाइँले यसमा एक नजर लिन सक्नुहुन्छ जुन तपाइँले के सोच्नुहुन्छ भनेर हेर्न। यद्यपि व्यंजनहरु Thermomix को लागी छैन, पक्कै केहि केहि छ जुन तपाई अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ।
आशा छ कि तपाईले यो उपयोगी पाउनुहुनेछ!
तपाईको मद्दत को लागी धेरै Ascen लाई धन्यवाद।… चुम्बन।
मसँग धेरै पानी बाँकी छ, चामल बाहिर आयो।
नमस्कार एलेना! यदि तपाईंले फोटोमा हेर्नुभयो भने, यो सूपको थोडा हो। Thermomix पूर्ण रूपमा सुक्खा चामल बनाउन सक्दैन। तिनीहरू सँधै महारहित वा सूफी शैली हुन्। तपाईंको केसमा, यदि तपाईं ड्राईर चाहनुहुन्छ भने, अन्तिम केही मिनेटहरूको लागि बीकर हटाउनुहोस् र अधिक पानी वाष्पीकरण हुनेछ। तपाईं मलाई भन्नुहुनेछ !!
महान Rebbe! तपाइँको टिप्पणी को लागी धन्यवाद। चुम्बनहरू!
नमस्कार मुफसाटाका, तपाईले प्रयोग गर्नु पर्ने चामल भनेको बमोजा वा गोलो एक हो, लामो कहिल्यै होइन। हामी यसलाई चिसो सलादका लागि आरक्षित गर्दछौं। हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद। शुभकामना।
लुज एबिलीरा पेरिज भन्यो
मसँग tm21 छ म कल्पना गर्छु कि मैले थ्रोटल गति १ राख्नु पर्छ, के यो यस्तै हो? धन्यबाद
Luz ABILLEIRA PEREZ लाई जवाफ दिनुहोस्
हो, तपाईं सहि हुनुहुन्छ। TM21 को साथ तपाईले थ्रटल र गति १ सेट गर्नुपर्नेछ।
कुन चामल प्रयोग गर्ने भन्ने बारे मसँग सँधै सँधै छु म सामान्यतया मेरो सबै जीवनको सामान्य SOS प्रयोग गर्दछु र म यसलाई छुटकारा दिन्छु। तपाईं कुन ब्रान्ड प्रयोग गर्नुहुन्छ?
पेलेलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते पेल, १OS मिनेटमा SOS चामलको साथ यो पूर्ववत भयो? यो धेरै दुर्लभ छ किनकि सामान्यतया १ 13 मिनेटको साथ तपाईं अल डेन्टेट हुनुपर्छ (कि भित्री भाग थोरै छ) र यदि हामीले त्यसलाई आराम गर्यौं भने यो तयार छ। के तपाइँ पक्का हुनुहुन्छ कि तपाइँ १-13-१-13 मिनेट राख्नुहुन्छ? अर्को चोटि जाँच गर्नुहोस् र यदि होईन भने, यसमा कम समय दिनुहोस्। मैले SOS र अन्य ब्रान्डहरू, र सेतो ब्रान्ड पनि प्रयोग गरेको छु र ती समयहरूको साथ यो उत्तम बाहिर काम गर्दछ। मलाई भन्नुहोस् यदि हामी तपाईंको भातमा के गलत हो भनेर पत्ता लगाउन सक्छौं। अंगालो।
तपाईको उत्तर को लागी धेरै धन्यबाद।
म समयलाई राम्ररी नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नेछु
सुसाना ललोरेन्टे लोरिडो भन्यो
उहम के एक चित्रकारी। म केहि चीजहरूको लागि थर्मोमिक्स प्रयोग गर्दछु, तर तपाईंको नुस्खा हेर्दा म निश्चित छु।
सुसाना ललोरेन्टे लोरिडोलाई जवाफ दिनुहोस्
सुसाना मलाई यो मनपर्दछ, धेरै फरक खाना बनाउन।
नमस्कार मलाई थाहा छ कि यो नुस्खा लामो समयको लागि प्रकाशित भएको थियो तर म यो हेर्न चाहन्छु कि यो चावल दुई व्यक्तिको लागि बनाउने हो कि मैले आधा मा सबै सामग्रीहरू मात्र कटौती गर्नुपर्दछ र यदि समय फरक छ भने ?? मलाई मद्दतको लागि धेरै धेरै धन्यबाद।
इरिनलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार इरिना, केहि पनि हुँदैन किनभने नुस्खा लामो समयदेखि प्रकाशित भयो! वास्तवमा, हामी खुसी छौं कि तपाईं हाम्रो कुनै पनि व्यंजनहरू तयार गर्नुहुन्छ, चाहे ती हालका हुन् वा नहोस्। थप रूपमा, यो डिश उत्कृष्ट छ। यदि तपाईंले आधामा परिमाण कम गर्नुभयो भने, यसले तपाईंलाई दुई जना व्यक्तिलाई राम्रोसँग खानेछ जुन यो अनौंठो खाना हो। यद्यपि समय एक समान राख्नुपर्दछ। धानको एक अन्न १०० अनाज जत्तिकै पकाउने समय चाहिन्छ। तपाईले हामीलाई भन्नुहोस् यो कसरी भयो? हामीलाई लेख्न को लागी धन्यवाद 🙂
मलाई यो नुस्खा मनपर्दछ!
यो हप्ताको एक पटक मेरो घरमा आधारभूत हो। मैले यसलाई कुखुरा, पसल, खरायोसँग बनाएको छु।
तपाइँको खाना पकाउने मा हरेक दिन हुक
नमस्ते, म तपाईंलाई जान्न चाहन्छु कि तपाईं नयाँ ताजा हरिया बीन्सहरू राख्नुभयो, पहिले नै पकाइएको वा भाँडा, किनभने यो ताजा छ भने, तिनीहरू निविदा बाहिर आउँदैनन्, ठीक छ? धन्यवाद
सुसाना म पूर्ण रूपमा सहमत छु,
नमस्कार! यो नुस्खा चामल हो, यो घरमा हाम्रो मनपर्ने मध्ये एक हो, म यसलाई लगभग हरेक आइतवार बनाउँछु। म सुरुमा पूरै प्याज थप्छु, लसुन, एक बे पात र मसलादार चोरिजोलाई टुक्रामा मिलाएर, यो तपाईंको औंलाहरू चाट्न बाहिर आउँदछ! तपाईका व्यंजनहरुका लागि धेरै धेरै धन्यबाद, जसले हामीलाई हाम्रो टि.एम. को अधिक फाइदा लिन मद्दत गर्दछ। अभिवादन
धन्यवाद मोनिका! धेरै राम्रो सुझाव। हामी धेरै खुसी छौं कि तपाईलाई यो धेरै मनपर्‍यो
मोनिका, तपाईंले सुरुमा कोरिजो राख्नु भयो। प्याज र लसुन वा कहिले यसलाई थप्नुहुन्छ? धन्यबाद
नमस्कार, म यो विधि दुईको लागि बनाउन चाहन्छु। यदि मैले आधा रकम राख्छु, के समयहरू उस्तै हुन्छन्? धन्यवाद!
त्यो एलिसिया हो, समान समय र सामग्रीहरू दुई द्वारा विभाजित। हामीलाई लेख्न को लागी धन्यवाद!
नमस्कार, म people व्यक्तिको लागि नुस्खा बनाउन चाहन्छु। के म पनी एकपटक र त्यसपछि पनी बनाउन सक्छु, यसलाई प्यालाको अन्त्यमा सँगै राख्छु र यसलाई तन्दोमा तताउँछ?
हेलो एस्तर, यी राशिहरू जुन appear व्यक्तिको लागि हो। 🙂
नमस्ते, म तपाईंलाई यो रकम बनाउन सक्छु भनेर सोध्न चाहान्छु, तर चावल थप्नु भन्दा पहिले मैले त्यस्तै शोरबाको आधा भाग राखें, यसलाई फ्रिज गर्न र अर्को दिन चावल फेरि बनाउने, त्यहाँ हामी दुई जना छौं, र कहिलेकाँही4का लागि रेसिपीहरू पकाउँदछु तर आधा सबै चीजहरू आधा स्थिर गर्दछु जुन स्थिर फ्री हो।
सेन्सीलाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई लाग्छ कि यो एक उत्कृष्ट विचार हो सेन्सी, यो तपाईंमा उत्कृष्ट देखिनेछ 😉
टुना र ओरोरा ससको साथ अण्डाहरू ग्रेटिन